बाघको दूध पोषिलो कि मुसाको ? | अग्निबाँण, समाचार र बिचारको अग्नि
← आजकी मोडल
वैद्य हावी, भट्टराई सुदृढ, दाहाल कमजोर →
बाघको दूध पोषिलो कि मुसाको ?
हरेक स्तनधारी जीवको दूध बच्चाका लागि अत्यन्त पोषिलो हुन्छ तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने आफ्नी आमाको दूध कुनै पनि जीव वा मनुष्यका लागि अन्य दूधभन्दा बढी पोषिलो हुन्छ। यसको अर्थ सबैभन्दा बलियो जीव बाघको दूधमा बढी पोषण तत्व हुने तर सानो वा कमजोर जीवको दूधमा पोषण तत्व कम हुने होइन। त्यसैले सानो तथा कमजोरको उदाहरणका रूपमा तिमीले लिएको मुसाको दूध अवश्य पनि उसको बच्चाका निम्ति कम पोषिलो हुँदैन। हरेक जीवको दूध उसको सन्तानका लागि उपयुक्त हुने गरी बनेको हुन्छ।
‘बालकलाई जन्मिएको २ वर्षसम्म स्तनपान गराउनुपर्छ।’ यही सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने शिशु जन्मनासाथ उसले आमाको दूध खान पाउनुपर्छ। यो शिशुको जन्मसिद्ध अधिकार हो। कुनै पनि शिशु आफ्नो खुसीले पृथ्वीमा जन्मिएको हुँदैन। मानिसहरू सन्तान आफ्नो रहरले जन्माउँछन्। आफ्नो रहरबाट प्राप्त गरिएको सन्तानप्रति उनीहरूको कर्तव्य पनि उत्तिकै गम्भीर हुन्छ भन्ने कुरा कसैले बिर्सनु हुँदैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा शिशुलाई स्तनपान गराउँदा आमाको सौन्दर्य कम हुन्छ, उनी छिट्टै बूढी हुन्छिन् भन्ने कुरामा पनि कुनै सत्यता छैन। यो गलत मानसिकताको सोच मात्र हो। सृष्टिले हरेक स्तनधारी जीवका लागि आफ्नो सन्तानलाई ख्वाउन दूध बनाएको हुन्छ। तसर्थ दूध ख्वाउँदा बच्चा बलियो हुनुका साथै आमालाई पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ। स्वास्थ्य एवं सौन्दर्यमा स्तनपान नगराउँदा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।
शिशुलाई दूध ख्वाउने आमाले कम्तीमा २ छाक पेटभरि पोषिलो खाना खान पाउनुपर्छ। विश्वभरका स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू स्तनपानको महिमा गाउँदै हिँडेका छन्। ’cause स्तनपान शिशुका लागि ज्यादै आवश्यक कुरा हो। स्तनपानको महत्त्व वैज्ञानिक तथा सामाजिक रूपमा प्रमाणित भैसकेका कारण यसको वकालत सबै क्षेत्रबाट हुन थालेको छ। यस विषयमा आवश्यक जानकारी नपाएका कारणले मात्र आमाहरू आफ्ना सन्तानलाई दूध चुसाउने कुरामा महत्त्व दिँदैनन्। अब हरेक सचेत किशोर-किशोरीले यसको महत्व बेलैमा थाहा पाइराख्नुपर्छ र अरूलाई समेत जानकारी गराउनुपर्छ। बाहेक स्तनपान गराउँदा अन्य धेरै प्रकारका फाइदा हुन्छन्। नवजात शिशुलाई जन्मिएको एक घन्टाभित्रै छातीमा टाँसी दूध चुसाउँदा आमाको दूध बढी पगि्रन्छ। सुत्केरी आमाको पाठेघर खुम्चन मद्दत पुग्नुका साथै अति रक्तस्राब हुने खतरा कम भई साल छिटो र्झन मद्दत पुग्छ। शिशुलाई स्तनपान गराउने महिलालाई अन्य महिलाको तुलनामा स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना दोब्बर कम हुन्छ।
शिशुलाई आमाको पहेंलो बिगौती दूध ख्वाउनुपर्छ। बिगौती दूध अत्यन्त पोषिलो हुन्छ। जन्मिएको ६ महिनासम्म शिशुलाई आमाको बाहेक अन्य कुरा नख्वाउनु नै राम्रो हुन्छ। यसो गर्दा झाडापखाला तथा अन्य रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। यो उमेरका शिशुलाई आमाको दूधबाहेक अन्य कुनै खाने कुरा तथा पानी ख्वाउन आवश्यक हुँदैन। कम तौलको शिशुले लगातार धेरै बेर दूध चुस्न सक्दैन। त्यसैले कम तौलका शिशुलाई छिनछिनमा थोरैथोरै बेर दूध चुसाउनुपर्छ।
शिशुको उमेर छ महिना पुगेपछि आमाको दूधका साथै अन्य खाना पनि दिनुपर्छतर शिशुको उमेर २ वर्ष नपुगेसम्म आमाको दूध छुटाउनु हुँदैन। आमाको दूध खाएका शिशुहरू गाईवस्तु वा बट्टाको दूध खाएका शिशुको तुलनामा स्वस्थ हुन्छन्। आमाको दूध शिशुले सजिलै पचाउँछन्। शिशुले जनावरको दूध तथा बट्टाको दूध आमाको दूधजस्तो सजिलै पचाउन सक्दैन। आफ्नो शरीरलाई उपयुक्त पोषण तथा झोल तत्व शिशुले केवल आमाको दूधमा पाउन सक्छ। आमाको दूधले एन्टिवायोटिकको काम गर्छ। यस्तो शक्ति अन्य दूधमा हुँदैन। घरबाहिर काममा जाने महिलाले आफ्नो दूध दुहेर सफा भाँडोमा राखिदिए बच्चालाई त्यही दूध ख्वाउन सकिन्छ। यसरी दुहेको दूध ८ घन्टासम्म बिगँ्रदैन। एचआइभी संक्रमित महिलाले जन्माएको शिशुमा स्तनपानमार्फत एचआइभी सर्ने सम्भावना हुन्छ। शिशुलाई एचआइभी सरिसकेको अवस्थामा भने कम्तीमा ६ महिनासम्म दूध ख्वाउनुपर्छ।
यति धेरै फाइदा रहेको विषयलाई सबैले स्वीकार गरून् भनेर वकालत गर्न उपयुक्त छैन त ? विश्वका १ सय ५० राष्ट्रभन्दा बढी सम्मिलित विश्व स्तनपान संगठन तथा स्तनपानका लागि वकालतकर्ताहरू विगत२० वर्षदेखि हरेक वर्ष अगस्त १ देखि ७ सम्म विश्व स्तनपान दिवस मनाउँछन् । नेपालमा पनि यो दिवस हरेक वर्ष साउन महिनाको दोस्रो हप्ता अंग्रेजी क्यालेन्डरअनुसार मनाइन्छ ।
Posted by agnibana on नोभेम्बर 26, 2010 in Uncategorized